Uhlu lwamasayithi wokulanda ama-ebook amahhala ngokusemthethweni | Onke ama-eReaders
Uhlu lwamasayithi wokulanda ama-ebook amahhala ngokusemthethweni
1 Ufuna i-ereader yokuvalelwa?
1.0.0.1 I-Kindle Paperwhite
1.0.0.2 I-Kobo Clara HD
2 Amasayithi angenzi inzuzo ukulanda ama-ebook
2.1 Amaphrojekthi amakhulu
2.2 Amaphrojekthi womuntu siqu
2.3 Amanye amasayithi wokulanda ama-eBooks
3 Amaphrojekthi wezohwebo anama-ebook amahhala
4 Amasayithi wokulanda ama-ebook ezobuchwepheshe
Ufuna i-ereader yokuvalelwa?
Abantu abaningi bayasibuza ukuthi isiphi isifundi esingathengwa ukwenza ukuvalelwa kujabulise kakhudlwana. Uma ungafuni ukuya ngqo ephuzwini, sincoma 2.
Isifundi esithengisa kakhulu emakethe. Imayelana nomfundi we-Amazon
I-Kobo Clara HD
Kubathandi bamazinga nekhwalithi
Ngalokhu kuhlanganiswa sihlose ukunikeza uhlu olusha lwe amasayithi wokulanda ama-ebook mahhala nangokomthetho. Umqondo wethu ukuvuselela uhlu ngezikhathi ezithile ngokungeza amasayithi amasha noma ukususa lawo angasasebenzi. Khumbula lokho zizohlala zingamaphrojekthi ahlinzeka ngokuqukethwe ngokusemthethweni.
Sizama ukuhlukanisa amasayithi ukuze ukusetshenziswa kwawo kube mnandi ngangokunokwenzeka. Kubakaki sikhombisa izilimi zama-ebook ongazithola kupulatifomu ngayinye. (ES) ISpanishi, (EN) IsiNgisi kanye (INGENYE) NgeSpanishi nangesiNgisi. Izindaba kusukela ukuvuselelwa kokugcina zivela ingemuva eliluhlaza.
Uhlu lwethu lune- 63 imithombo enezigidi zezincwadi ezitholakala ngazo zonke izilimi.
Amasayithi angenzi inzuzo ukulanda ama-ebook
Kulesi sigaba sizokhombisa izingosi ezingenzi nzuzo lapho landa izincwadi zazo zonke izinhlobo kusuka kuzinto zakudala, kuya kuma-eseyi, ngamanoveli noma ezincwadini zezingane.
Amaphrojekthi ajwayelekile kakhulu nemisebenzi yakudala esezindaweni zomphakathi. UGutenberg ugqame ngaphezu kwakho konke, ngokuba kabanzi kakhulu futhi ngoba usinika ama-ebook ku .epub naku .mobi.
Iphrojekthi yaseGutenberg (INGENYE) Okwakudala phakathi kwama-Classics uma kukhulunywa ngamaphrojekthi anikezela ngemisebenzi engakhokhelwa. Ingobo yomlando enkulu kunazo zonke yezincwadi zesizinda somphakathi emhlabeni.
Archive.org (INGENYE) Enye ingobo yomlando yezigidi zamabhuku wesizinda somphakathi esenziwe ngekhompyutha. Izipesheli pdf.
- ILabhulali Yokuvula (INGENYE) Iphrojekthi ye-Internet Archive ehlose ukudala ikhasi lewebhu layo yonke incwadi ekhona. Yize ingakuvumeli ukulandwa okuvela kumathebhu noma kumakhasi ezincwadi, ixhumanisa neGutenberg, Archive noma umthombo lapho itholakala khona uma isendaweni yomphakathi.
Wikisource ngeSpanishi futhi uma ufuna izincwadi ngolunye ulimi Wikisource. Kungumtapo wolwazi oku-inthanethi wemibhalo yoqobo esizindeni somphakathi noma ngaphansi kwelayisense.I-GFDL iphrojekthi ye-Wikimedia evumela ukulanda ku-pdf.
Ama-Wikibooks (ES) Enye iphrojekthi ye-Wikimedia ehlose ukwenza izincwadi, imanyuwali, okokufundisa noma eminye imibhalo yezemfundo enokuqukethwe kwamahhala nokufinyelela kwamahhala kunoma ngubani.
iBiblio (EN) Umtapo wolwazi omkhulu kanye nokugcina umlando kwidijithali.
Umtapo wolwazi waseSpanishi (ES) Ingosi yamahhala neyamahhala yezincwadi ezifakwe ekhompyutheni kulabhulali kazwelonke.
Ilabhulali eyi-Miguel de Cervantes Virtual (ES) Iqoqo elibonakalayo lemisebenzi yakudala ngezilimi zaseSpanishi.
Inethiwekhi kamasipala yemitapo yolwazi yaseSeville (ES) Ikhathalogi yedijithali yenethiwekhi yomtapo wolwazi kamasipala waseSeville.
I-Europeana (INGENYE) Kuyindawo yokufinyelela ezinkulungwaneni zemithombo yedijithali eYurophu.
University of Adelaide (EN) Umtapo wolwazi oku-inthanethi we-University of Adelaide e-Australia, usivumela ukuthi sifunde online, noma silande imisebenzi ngezindlela ezahlukahlukene.
Ukubuyekezwa kweKobo Clara HD
Amaphrojekthi womuntu siqu
Amaphrojekthi amancane angenzi nzuzo.
Goose no-Octopus (ES) Enye yezinhlelo ezingenzi nzuzo ezinekhwalithi ephezulu kakhulu ezincwadini zayo. IGanso y Pulpo yiphrojekthi yokushicilela ezimele engenzi nzuzo efuna ukuphinda ikhiphe umbhalo okulukhuni ukufinyelela kuwo noma ukukhohlwa futhi osuvele ungenawo amalungelo.
Izinganekwane ze-Algernon (ES) Isinyathelo esihle kakhulu esishicilela izinganekwane ezingashicilelwe, izindaba eziqanjiwe zesayensi nezindaba ezethusayo ngeSpanishi. Enye iphrojekthi yomuntu siqu engenzi nzuzo esisilethela izindaba ezivela kubalobi abaphambili abangakaze bashicilelwe ngeSpanishi. Ophumelele i-Ignotus 2013, uma uthanda izindaba eziqanjiwe zesayensi kufanele.
Ama-Cruciform Editions (ES) Indlu encane yokushicilela ezimele engenzi nzuzo, ethola i-Ignotus ngo-2013, isinikeza ama-ebook amahhala kanye namanye anama-edishini alinganiselwe okuthi, uma eseqedile abe yizizinda zomphakathi.
Amatende Encwadi (ES) Achazwa njengomtapo wolwazi wokubambisana wedijithali. Bazinikele ekuxhumaniseni imisebenzi enamalayisense avulekile. Ixhumanisa okuningi nezinsizakusebenza ezindabeni zepolitiki, zenhlalo nezokuxhumana.
I-Qomun (INGENYE) Isiqondisi kanye nenkundla yokusabalalisa amasiko yamahhala.
1 incwadi 1 € (ES) Ukuphela kwephrojekthi kulo lonke uhlu olunganikeli ngezincwadi zamahhala, kepha imbangela kufanelekile. Ukuze ushintshele umnikelo we-Save the Children ungalanda zonke izincwadi ozifunayo, yize ziphakamisa ukuthi ukhokhe i- € 1 ngencwadi ngayinye ukusiza izingane.
Izincwadi zedijithali (ES / EN / FR) Ukuhlanganiswa kwemisebenzi eyenziwe ngu-Ignacio Fernández Galván.
Amafomethi we-Kindle, yiziphi i-eBooks ongazivula kusifundi se-Amazon?
Amanye amasayithi wokulanda ama-eBooks
Kulesi sigaba sibona izinsiza ezisinikeza ama-ebook ngezihloko ezithile.
IMetropolitan Museum of Art (EN) IMetropolitan Museum of Art eNew York isinikeza inani elikhulu lokushicilelwa ngefomethi ye-PDF elizungeza umhlaba wobuciko.
I-Digital Comic Museum (EN) Iqoqo lamahlaya wakudala kusuka enkathini yegolide enamahlaya wesizinda somphakathi angaphezu kuka-15.000 wokulanda kwamahhala.
Umtapo Wezincwadi We-Inthanethi Wezobuchwepheshe Kwezemfundo (ES) Kuhlanganiswa izincwadi nomagazini bedijithali ku-PDF okwenziwe nguSolwazi Diego F. Craig, emkhakheni we-Educational Technology, futhi konke kungamaphepha asesizindeni somphakathi noma anamalayisense avumela ukuthi kwabelwane ngawo.
Boe - Umthetho (ES) Ukuhlanganiswa kwemithethonqubo eyinhloko esebenza ohlelweni lwezomthetho kuvuselelwa njalo futhi kumafomethi we-pfd ne-epub. Zethulwe ngamagatsha omthetho.
Amaphrojekthi wezohwebo anama-ebook amahhala
Kuzo amaphrojekthi ahlose ukuhweba anikezela ngezincwadi ezithile zamahhala. Lapha sithola izinkampani ezinkulu ezifana ne-Amazon, i-Google noma i-book house, abashicileli abancane abanikeza ama-ebook amahhala namanye amawebhusayithi nezinjini zokusesha ezincike kumaphrojekthi afana neGutenberg.
Amazon Kindle (INGENYE) I-ebook giant isinikeza inani elikhulu lama-ebook amahhala ngazo zonke izilimi.
- Isizinda Somphakathi ku-Amazon (INGENYE) Sesha izincwadi ezivela ku-Amazon ezinelayisense ye-Public Domain.
- I-Free Book Sifter (INGENYE) Injini yokusesha esekwe ezincwadini ze-Amazon ukwenza kube lula ngathi ukuzingela ama-ebook amahhala e-Kindle yethu, kunezincwadi ngeSpanishi yize okugcwele kakhulu kuyizincwadi zesiNgisi.
- Amaziro angamakhulu (ES) Enye injini yokusesha esekwe ku-Amazon. Usikhombisa izincwadi zeSpanishi.
- I-Freebooksy (EN) Le phrojekthi isuselwa ekunikezeni izincwadi zamahhala ezivela kwa-Amazon, uBarnes noNobles noKobo futhi iziveza kithi ngefomethi yebhulogi.
Indlu yencwadi (INGENYE) Esinye sezitolo ezinkulu ezidayisa izincwadi eSpain, ikhathalogu yaso ebanzi yezentengiso ifaka imisebenzi yamahhala noma engabizi mali.
Amabhuku we-Google (INGENYE) Isebenza njengenkomba yezincwadi lapho singathola khona inani elikhulu lezincwadi ezitholakalayo zokuzifunda ku-inthanethi yize kungenakulandwa.
Isitolo Play (INGENYE) Isitolo esiku-Google online, lapho singathola khona izincwadi eziningi zamahhala esingazifunda ku-Smartphone noma kwi-Tablet yethu.
Isizinda somphakathi (ES) Iphrojekthi efana nomkhombandlela lapho banesibopho sokusabalalisa nokuhlanganisa imisebenzi eseyizizinda zomphakathi.
umtapo wolwazi (ES) Initiative ekuvumela ukuthi ulande ama-ebook amahhala bese ukhokha ngemuva kokuwafunda lokho ocabanga ukuthi kufanelekile, indlela entsha yokwenza imali ngemisebenzi. Kudinga ukubhaliswa.
Incwadi ebonakalayo (ES) Portal lapho ababhali bakudala abanomsebenzi esizindeni somphakathi bajoyina ababhali abasha abafaka imisebenzi yabo ukuze basatshalaliswe.
Abafundi beBQ (ES) Ukukhethwa kwama-classics lapho inkampani ye-BQ ilayisha khona izincwadi zabafundi bayo. Basishiyela ifayela le-zip esizolilanda.
Umtapo Wezincwadi (INGENYE) IPortal enikeza inani elikhulu lama-ebook.
Izincwadi (ES) Umtapo wolwazi we-elekthronikhi osinikeza imisebenzi ethile ekhethiwe emphakathini.
Izincwadi eziningi (EN) Iphrojekthi edonsela kuphrojekthi yeGutenbeberg neGenome kunamabhuku alalelwayo.
eBooksgo (EN) Isiqondisi sencwadi esuselwa kuGutenberg.
Incwadi Yeplanethi(ES) Inikeza amabhuku wesizinda somphakathi.
Vula ama-ebook wamahhala wamaSiko (EN) Faka kuhlu izincwadi ezingaphezu kwama-700 zamadivayisi ahlukahlukene, ama-ereaders, ama-iphones, i-iphdss, ama-smartphones, njll.
Izinhlelo zeDyskolo (ES) Okokuhlela lapho yonke imisebenzi eyishicilelayo ingaphansi kwelayisensi yeCreative Commons
Bubble (ES) Ipulatifomu enkulu yokushicilela ideskithophu inenombolo enkulu yezincwadi zamahhala.
Izimpawu ze-24 (ES) Kuyipulatifomu yokufunda online, isilinganiso esilinganiselwe sokufunda izincwadi online, kepha kusishiya nemiqulu eyahlukene ukuthi sifunde mahhala.
I-Kobo (EN) I-giant Kobo, inama-ebook wamahhala kukhathalogi yayo njenge-Amazon.
Barnes & Noble (EN / ES) Owesithathu embangweni kanye neKobo ne-Amazon, unamanani wamahhala wokulanda.
Smashwords (EN / ES) Umsabalalisi wencwadi ye-Indie, onenombolo enkulu yama-ebook amahhala.
Ebook mall (EN) Ama-ebook edijithali wabafundi, ama-iphone, ama-smartphones, amathebulethi, ama-ipads, i-pc kanye ne-mac
Ezemidlalo (ES) Uhlobo lomshicileli olusithokozisa ngeminye yemisebenzi yakhe mahhala
ULektu (ES) ipulatifomu enkulu yamasiko aseSpain, lapho singathola khona ama-ebook, ama-audiobooks nama-podcast noma ngabe akhokhelwe, mahhala, ngokulanda ngokukhokha komphakathi noma ngendlela yokukhokha uma uthanda.
Incwadi (ES) Izincwadi ezingaphezu kuka-10.000 zitholakalela ukulandwa. Noma kumahhala, sidinga ukubhalisa kuwebhu ukuze sizilande.
Ama-monger amaphupho (ES) Lo mshicileli ogxile endabeni ugxila ebhizinisini lakhe ngokuthengisa izincwadi zamaphepha kepha usishiyela imisebenzi eminingana ngaphansi kwelayisensi yeCreative Commons ( I-CC BY-NC , I-CC BY-NC-SA , I-CC BY-NC-ND )
Izincwadi efonini yami (EN) Ama-ebook ahlelwe ukuze afundwe kunoma iyiphi ifoni noma idivayisi efakwe iJava
I-junkie ebook (EN) Ipulatifomu lababhali abasha nabazimele
I-Bibliotastic (EN) Omunye umshicileli wabalobi abazimele
Amasayithi wokulanda ama-ebook ezobuchwepheshe
Amawebhusayithi akhethekile ekunikezeni izincwadi zamahhala nezomthetho zezobuchwepheshe nezesayensi.
Vula iLibra (INGENYE) Umtapo wolwazi omkhulu we-inthanethi wama-ebook ezobuchwepheshe. Ngaphandle kokungabaza, iphrojekthi ethakazelisa kakhulu ehlanganisa futhi isinikeze inani elikhulu lama-ebook ezobuchwepheshe namahhala. Ilungele ukulanda.
Ubuchwepheshe beMicrosofot (EN) IMicrosofot isishiyela ubuchwepheshe bamahhala nama-ebook esoftware ukulanda ngefomethi ye-pdf noma ukufunda ku-inthanethi.
Ama-ebook e-NASA (EN) Izincwadi zobuchwepheshe be-NASA ngezihloko zezindiza. Inohlonze impela.
Izincwadi ze-CSIC (ES) Inombolo enkulu yokushicilelwa kwamahhala evela eMkhandlwini Ophakeme Wezocwaningo Lwezesayensi. Ithinta wonke amagatsha esayensi.
Ku-Tech (EN) Ikhathalogi ethakazelisa kakhulu yezihloko zobuchwepheshe nezesayensi ezisebenza nge-Open Access.
Izincwadi Zamahhala Zamahhala (EN) Izincwadi zobunjiniyela nezinhlelo zamahhala zamahhala nezingenayo inzuzo.
Ama-O'Really OpenBooks (EN) Indlu yokushicilela yakwa-O'Really isishiya nezincwadi zayo ezivulekile. Azikwazi ukulandwa kepha ungafunda ku-inthanethi, ezinye izinsiza ezithakazelisa kakhulu.
Izincwadi Zokuhlela Ezamahhala (EN) Mhlawumbe ukufakwa kuhlu okuhle kunakho konke engikuthole, ukuhlanganiswa okuhle kakhulu, okunesihluku, kugcinwe kusesikhathini ngeGithub. Ngalesi sixhumanisi ezinye izixhumanisi zobuchwepheshe zicishe ziyeke ukwenza umqondo. Ngaphezu kweGithub siyithola ku- i-reSRC ngefomethi yewebhu enobungani
Izincwadi Zokuhlela Eziku-inthanethi (EN) Ukuhlanganiswa kwemisebenzi ezinhlelweni, isayensi yamakhompyutha, ubunjiniyela besoftware, ukuthuthukiswa kwewebhu, ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza, yolwazi, amanethiwekhi, njll.
Futhi yilokhu okwamanje 🙂
Okwamanje asangezanga abashicileli abanikela ngezincwadi zamahhala kepha abangavumeli ukuthi zihlungwe kalula noma zisesheke, kepha sicabanga ukuthi ungazengeza kanjani ohlwini ngoba impela abantu abaningi banesithakazelo.
Uma wazi ngamasayithi amaningi anokuqukethwe kwamahhala nokusemthethweni esingakufakanga, sicela sazise futhi sizobangeza ohlwini lwe amakhasi okulanda ama-ebook amahhala online.
Indlela ephelele ye-athikili: Onke ama-eReaders » Software » eBooks » Uhlu lwamasayithi wokulanda ama-ebook amahhala ngokusemthethweni
UBoris Da Silva Pérez kusho
Ngiyabonga kakhulu, futhi ngiyakuhalalisela nge-blog, ngikulandela nsuku zonke! Umsebenzi omuhle!
Phendula uBoris Da Silva Pérez
UNacho Morató kusho
Ngiyabonga ngokusifunda 🙂 Sanibonani
Phendula uNacho Morató
U-NIEVES PEREZ SAN JUAN kusho
NGIYABONGA KAKHULU NGESIPHO SONKE SOLWAZI LWAKHO LWAMASIKO NGIYABONGA KAKHULU.
Ngithole i-imeyili. Ngicela ungitshele ukuthi ngihamba kanjani ngokusesha, ngokulanda ama-ebok? Ngiyabonga.
Sawubona Enilda, uthole i-imeyili ebibe yisaziso somyalezo oyimfihlo esithangamini somkhankaso omusha esisasifukamela kodwa ongakalungi. https://www.todoereaders.com/foros/showthread.php?t=794
Kuhle kangakanani, Nacho, ukuthi wabelana ngala masayithi amasiko.
Ngine-blog yezincwadi ezilandiwe (wonke amalungelo akhishiwe), othobeke kakhulu kunalawo owashicilele, yebo. Nakhu ngiyabelana ngakho: i-Epub ne-PDF mahhala, uma kwenzeka othile efuna ukusivakashela 🙂
Ngibonga kakhulu ngalokhu kuhlanganiswa okuhle, engicabanga ukuthi, kuzokuthatha isikhathi eside ukuhlangana noku-oda.
Sawubona, ngiyabonga kakhulu ngesiphakamiso, ngizobuyekeza iphrojekthi yakho futhi uma ihlangabezana nemibandela ekuvuseleleni okulandelayo kohlu engizokwenza ezinsukwini ezimbalwa ngizokungeza.
Hhayi, Nacho, ngiyabonga kakhulu! Ngiyethemba ukuthi iyahlangabezana nezidingo.
U-Ephreli 23 wusuku olukhetheke kakhulu emhlabeni wonke ngesikhumbuzo se- "International Book Day" kanye ne- "Author's Right", kulesi sixhumanisi esilandelayo ngikushiyela ukuhlanganiswa kwama-ebook angama-40 wokumaketha online ngo-2014:
Kulesi sixhumanisi ungabona ukuthi ezinye izincwadi zizoba mahhala nini ku-Amazon.
Sawubona ntambama, ngithengile incwadi eyi-bq cervantes e, kepha ngiyaqaphela ukuthi cishe zonke izincwadi zenzelwe i-kindle ...
Mngani omuhle, uma lokho kwenzeka kakhulu, kuvame ukuba ukuphemba izincwadi uma ufuna ukuvakashela leli khasi futhi uzothola amafomethi amaningi ngaphezu kokuba nezihloko ezingaphezu kweziyizinkulungwane ezingama-30 http://www.megaepub.com/
sawubona kungani ungazami ukulanda i-epub mahhala kuleli khasi [ehleliwe] inezincwadi kuwo wonke amafomethi!
Sawubona Milagros. Sikhuluma kuphela ngamasayithi anokulandwa okusemthethweni.
Unjani? Uyazi noma iyiphi ipulatifomu lapho ungalayisha khona ama-epub, futhi uwabonise njengeshalofu elibonakalayo? Ngamanye amagama, ishalofu elibonakalayo lezincwadi zakho efwini. Ngiyabonga!!
Sawubona Darío, njengamanje angazi lutho yize ngiqinisekile ukuthi kuzoba nokuthile. Inketho enhle ukufaka umtapo wakho wezincwadi nomphathi weCaliber kudropbox, ikhophi, idrayivu noma okufanayo. Ngakho-ke uhlala unezincwadi zakho online.
UNacho, ngiyabonga ngempendulo. Kepha engikufunayo akukhona nje ukubasindisa emafini, kodwa ukukwazi ukubona ngeso lengqondo izembozo namagama alowo nalowo, ukuze bakwazi ukuzikhetha. Uma ingene kusuka kuthebhulethi yami iye efwini, ngizobona kuphela amagama wamafayela, hhayi amakhava. Futhi uzilayishe uma kunesidingo. Uma uthola okuthile, ngazise! Ngiyabonga!
umuntu wesilisa kusho
Sawubona, ngidinga incwadi ethi "The English Cemetery" kaJM Mediola, ungangitshela ukuthi ngingayithola kanjani. Ngiyabonga.
Sawubona. Ngikumema ukuthi uhlangane no-Ablik ( http://ablik.com). Ama-ebook angalandwa noma afundwe ngqo kusikrini nganoma iyiphi idivayisi. Yimisebenzi yakudala yezincwadi engenalo ilungelo lobunikazi, noma imisebenzi yasekuqaleni, esemthethweni ngokuphelele. Ingashicilelwa futhi. Ngikufisela okuhle!
Geez, sengikhulile futhi "ngibamba isinambuzane salezi zinto", ekubeni i-novice ngokuphelele, ngiya ngokuya ngiya (noma ngizwa ngathi ...) ... "uchwepheshe", ngakho konke ngiyabonga futhi izihloko eziningi kangaka ku- «todoreaders.com»! NGIYABONGA !
ULucia Garcia kusho
Ukuhlanganiswa okuhle kakhulu uNacho! Ngaphandle kwe-Amazon enokuzwakala, yimaphi amanye amawebhusayithi owancomayo ngokulalela amabhuku alalelwayo?
Ntambama enhle, indatshana ethokozisayo yabathandi bokufunda.
Kubo bonke labo abanentshisekelo yokwamukela izincwadi ezingama- $ 0,00 Kindle kubhulogi, ezamabhizinisi, ezamabhizinisi aku-inthanethi, ukuzithuthukisa, imali engenayo noma ezezimali zomuntu siqu, ngingakusiza.
Ngithengile iBQ Cervantes 3 eMadrid. Kepha ngihlala e-Argentina futhi ngizithola ngimangele ukuthi angikwazi ukuthenga izincwadi eSitolo noma kunoma yiziphi ezinye ezweni lami ngoba uhlelo lwe-NUBICO alwamukeli, ngokwesibonelo, amakhadi wesikweletu ase-Argentina, into engenzeki namanye amazwe emhlabeni engithenga kuwo.
Nginenye indlela yokuthenga noma ngichithe imali?
Ngithenge iBA Cervantes 3 ohambweni lwami lwakamuva eMadrid
Njengoba isitolo sakwaNubico singawamukeli amakhadi wesikweletu avela ezweni lami, angikwazanga ukuthenga noma yiziphi izincwadi. Futhi ngikhuluma ngokuthenga, hhayi ukulanda ama-ebook amahhala.
Ngabe othile angangitshela ukuthi yisiphi isitolo noma umphakeli wama-ebook engingathenga kusuka e-Argentina?
Sawubona Goodnight. Ungancoma umuntu o-10 reader. Nginentshisekelo kule fomethi yokufunda izincwadi zobuchwepheshe ngefomethi ye-pdf. Nginabanye abanye abafundayo (uPapyre noBq Cervantes) kepha kulezi akukho ndlela yokufunda ama-pdf. Ngabe umfundi o-12 ulungela futhi atholakale kalula nini? Ngikufisela okuhle
Ngincoma ukuthi ubheke iphrojekthi ye-Ebrolis, iwebhusayithi yayo ithi http://www.ebrolis.com
Sawubona, siyayibuyekeza futhi uma ihlangabezana nemibandela sizoyengeza kusibuyekezo esilandelayo seposi.
Sawubona ngifuna ukwazi nge «Unbox» ukulanda ngokushesha izincwadi zedijithali ezihlobene nezempilo ikakhulukazi i-oncology kanye namazinyo, izincwadi ezingatholakali ezweni lami ziphrintiwe. Ngifuna izincomo ezivela kulelo khasi ukuthi ezindaweni eziningi zingiqondise kule.
ULuis Diego kusho
Ngincoma le 2020 ukuze ikwazi ukulanda izincwadi ikwenze kusuka ku-shubpdfgratismundo.xyz zibuyekeze kakhulu ama-ebook
I-Amazon ikuthengela i-eReader yakho yakudala
I-BookBook, ikesi elimise okwazi ukumisa incwadi le-iPad Air yethu